Bring It On, Ghost (2016) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Original name싸우자 귀신아
StarringKang Ki-young, Kim Sang-ho, Kim So-hyun, Kwon Yul, Lee Da-wit, Lee Do-Yeon, Ok Taec-yeon
Synopsis of Bring It On, Ghost (2016) Complete
လူငယျလေးတဈယောကျ..သူ့မှာ မှေးရာပါထူးခွားတဲ့စှမျးအငျပါလာတယျ…အဲ့ဒါက သရဲတှကေို မွငျနရေသလို ဒီသရဲတှကေို ထိတှတေို့ကျခိုကျလို့လညျးရတယျ…ဒီလောကကွီးမှာ ကောငျးမှနျတဲ့သရဲတှေ ရှိသလို လူတှကေို လိုကျလံဒုက်ခပေးနတေဲ့ သရဲဆိုးတှလေညျးရှိနတေော့ ဒီလူငယျလေးဟာ ခတျေနဲ့အလိုကျ တဈမြိုးကွံတယျ…သရဲဆိုးတှကေို အခကွေးငှနေဲ့ လိုကျလံနှိမျနှငျးပညာပေးရငျး စီးပှားရေးလေး တဈဘကျတဈလမျးက ဝငျငှတေိုးစဖေို့ကွံရှယျတယျ….
ဒီလိုလိုကျဗငျြးတဲ့အခါမှာ သူ့ပညာအဆငျ့က အငယျတနျးစားမို့ အစှမျးနိမျ့သရဲတှကေိုပဲနှိမျနှငျးနိုငျတာမို့ သရဲဆိုးတှနေဲ့တှရေ့ငျ မာလကီးယားပွီးပွနျလာရလရှေိ့တယျ…ဒါကွောငျ့ ဝငျငှကေလညျးထငျသလောကျမရဘူး…ဆိုတော့ သရဲဆိုးတှကေိုနှိမျနှငျးဖို့ သူ့ပညာကို Upgrade လုပျရငျး သရဲဆိုးတှကေိုလုပျဖို့ကွိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ သူထငျမထားဖူးတဲ့ သရဲမလေးနဲ့တှရေ့ငျး နောကျကှယျက ထူးဆနျးရှုတျထှေးလှတဲ့ ဆိုးယုတျမှုတှကေို သိလာရတဲ့အခါမှာတော့…. ဒီစီးရီးက အပိုငျး(၁၆)ပိုငျးရှိပွီး ရယျလညျးရယျရသလို အကျရှငျခနျးတှလေညျး တဈလှကွေီးပါတယျ.. ပွီးတော့ ဇာတျလမျးလေးက ဆနျးလှသလို မငျးသားမငျးသမီးကလညျး ခစြေ့ရာလေးတှမေို့… ဖနျတှအေတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
လူငယ်လေးတစ်ယောက်..သူ့မှာ မွေးရာပါထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ပါလာတယ်…အဲ့ဒါက သရဲတွေကို မြင်နေရသလို ဒီသရဲတွေကို ထိတွေ့တိုက်ခိုက်လို့လည်းရတယ်…ဒီလောကကြီးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့သရဲတွေ ရှိသလို လူတွေကို လိုက်လံဒုက္ခပေးနေတဲ့ သရဲဆိုးတွေလည်းရှိနေတော့ ဒီလူငယ်လေးဟာ ခေတ်နဲ့အလိုက် တစ်မျိုးကြံတယ်…သရဲဆိုးတွေကို အခကြေးငွေနဲ့ လိုက်လံနှိမ်နှင်းပညာပေးရင်း စီးပွားရေးလေး တစ်ဘက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေတိုးစေဖို့ကြံရွယ်တယ်….
ဒီလိုလိုက်ဗျင်းတဲ့အခါမှာ သူ့ပညာအဆင့်က အငယ်တန်းစားမို့ အစွမ်းနိမ့်သရဲတွေကိုပဲနှိမ်နှင်းနိုင်တာမို့ သရဲဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင် မာလကီးယားပြီးပြန်လာရလေ့ရှိတယ်…ဒါကြောင့် ဝင်ငွေကလည်းထင်သလောက်မရဘူး…ဆိုတော့ သရဲဆိုးတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ သူ့ပညာကို Upgrade လုပ်ရင်း သရဲဆိုးတွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ သူထင်မထားဖူးတဲ့ သရဲမလေးနဲ့တွေ့ရင်း နောက်ကွယ်က ထူးဆန်းရှုတ်ထွေးလှတဲ့ ဆိုးယုတ်မှုတွေကို သိလာရတဲ့အခါမှာတော့…. ဒီစီးရီးက အပိုင်း(၁၆)ပိုင်းရှိပြီး ရယ်လည်းရယ်ရသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း တစ်လှေကြီးပါတယ်.. ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းလေးက ဆန်းလှသလို မင်းသားမင်းသမီးကလည်း ချေ့စရာလေးတွေမို့… ဖန်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ProductionGroup Eight, Studio Dragon, The Unicorn
Firt air date2016-07-11
Last air date2016-08-30
Home PageBring It On, Ghost (2016) Complete